Ukuphila Kahle | Julayi 2021
Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Cindezela Izilwane Ezifuywayo Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani
Izizathu eziyi-10 zokuthi kungani iziguli zingalandeli imiyalo yodokotela
Ukunamathela emithini kubalulekile futhi kubaluleke kakhulu uma usebenzisa imithi esindisa impilo. Kepha ezinye iziguli azikathathi imishanguzo yazo. Nazi izizathu eziyi-10 zokuthi kungani.
Imibuzo emi-5 okufanele uhlale uyibuza usokhemisi wakho
Ukuthi unezinkinga noma cha, kufanele uhlale ubuza usokhemisi le mibuzo elula lapho uqala umuthi omusha.
Izindlela ezi-5 ezimangazayo zokucindezeleka zingathinta umzimba wakho
Ukusuka ekulahlekelweni izinwele kuya kokuxhuzula, ingcindezi ithinta okungaphezu kwengqondo — ibanga nobuhlungu emzimbeni. Zama lezi zindlela zokubhekana nazo ngaphambi kokuthi ukucindezeleka kuthinte umzimba wakho.
Amathiphu ama-5 wokuhamba nemithi kadokotela
Iyini inqubomgomo yemithi ye-TSA? Ngingakwazi ukupakisha izindondo ekuqhubekeni? Izeluleko zethu zokundiza nemithi kadokotela zizokulungiselela iholide elijabulisayo nelinempilo.
Izinzuzo zamalahle acushiwe nokuthi uwasebenzisa kanjani ngokuphepha
Ngabe amalahle akulungele? Kuphephile? Funda ukuthi ungawasebenzisa kanjani amalahle acushiwe ukugaya nokukhipha ubuthi emzimbeni, bese ubona ukuthi imiphi imiphumela engemihle okufanele uyazi.
Ungayinciphisa kanjani i-‘Quanan-tinis ’
Ngemuva konyaka we-COVID-19, i-coronavirus notshwala kubonakala kuhambisana. Uma ukuphuza kwakho kuyinkinga, nansi indlela yokunciphisa.
Ingabe i-apula cider uviniga inezinzuzo zezempilo?
Sihlolisise izifundo futhi sabonisana nodokotela ngezinzuzo zangempela ze-apula cider uviniga, futhi silinganise lezo ezingahambisani nemiphumela yaso emibi - nakhu esikutholile.
Ngabe i-apple cider uviniga ingasiza ekwehliseni isisindo?
Ingabe ukuphuza i-apula cider uviniga wokwehlisa isisindo kuyasebenza ngempela? Funda ukuthi i-ACV yenzani emzimbeni wakho nokuthi ezinye izidakamizwa zokwehlisa isisindo zingasiza kanjani.
Izizathu ezi-7 zokuthi kufanele uthole umzimba wonyaka
Ungaqiniseki ukuthi umzimba wonyaka uyadingeka yini? Funda ukuthi yini efakiwe ekuhlolweni ngokomzimba konyaka, ukuthi ngubani okufanele akuthole, nokuthi ungonga kanjani imali ekunakekelweni kwezempilo.
Ukudla okuhle kakhulu kwezimo ezi-15 ezivamile zezempilo
Funda ngezinguquko zokudla ongazenza ukuphatha izimpawu zakho zezimo ezejwayelekile zezempilo ezinjengesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme kanye ne-IBS.
Ukwelashwa kwe-hangover okungu-14 okusebenzayo
Akekho ofuna ukuchitha izinsuku zakhe egula embhedeni (ezisola ngokukhetha izolo kusihlwa). Uma u-imbibe, ungahle udinge lokhu kuphulukiswa kwe-hangover okusebenza empeleni.
Izinhlelo zokusebenza zokwelapha akumele zithathe isikhundla sokuvakasha kukadokotela, kepha lezi zinhlelo zokusebenza ezilinganiselwe zezempilo yengqondo zinganikeza ukusekelwa okuthile kwabasebenzisi abanokukhathazeka noma ukudangala.
Yini abadala okufanele bayazi ngamavithamini
Izidingo zokudla okunempilo ziyashintsha njengoba ukhula. Lezi zeluleko ngamavithamini kubantu abadala zingasiza ekuqinisekiseni ukuthi uthola okwanele kwalokho okunconyelwe abaneminyaka engama-50, 60, kanye no-70.
Konke odinga ukukwazi ngokunikela ngegazi
Othile e-U.S. Udinga igazi njalo ngemizuzwana emibili. Ukuphela kwendlela yokukunikeza lokho ukunikela ngegazi. Nakhu ukuthi kusebenza kanjani, nokuthi kusiza bani.
Izidingo zokunikela ngegazi zivikela abanikeli nabamukeli. Eminye imithi nezimo zezempilo zingakuvimbela ekunikeni igazi. Thola ukuthi ngubani onganikela ngegazi.
Kungaba nomvuzo ukusiza othandekayo, kepha futhi kungakhathaza. Ngaphambi kokuthi ushise ukutubeka komnakekeli, zama lawa macebiso.
Umhlahlandlela wabanakekeli wokuzinakekela nokugwema ukutubeka komnakekeli
Abanakekeli basengozini yokukhathala ngokomzwelo nangokomzimba. Funda izinto ezinobungozi, izimpawu zokudinwa, nemibono ethile yokunciphisa ingozi yokutubeka.
Ucwaningo lwe-2020 CBD
Ucwaningo lwethu lwe-CBD luthole ingxenye eyodwa kwezintathu zabantu baseMelika bezamile i-CBD, kanti abasebenzisi be-CBD abangama-45% bakhuphule ukusetshenziswa kwabo ngenxa ye-coronavirus. Funda ngokusetshenziswa kwe-CBD eMelika.
Ukushoda kwezakhi zomzimba ezivamile e-U.S.
Cishe i-10% yabantu base-U.S. Kungadala izinkinga zangempela zempilo, uma kungalashwa, kepha kuyalungiswa ngalawa masu.
umkhuhlane awusathathelani nini ne-tamiflu
i-omeprazole ingadala i-thc
kubiza malini ukubona udokotela e-usa
ingabe i-adderall ivela njenge-meth esivivinyweni sezidakamizwa
liyini iphilisi elihle lokulawula inzalo